Netizen Report: Mitodika Hatrany Any Amin’ny Fampitam-Baovao Mahaleotena Ao Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2016 10:30 GMT
Naji Jerf sy Ahmad Almossa, olompirenena Syriana mpiasan'ny fampitam-baovao maty tamin'ny 2015. Sary nozaraina fatratra tao amin'ny Twitter.
Hatramin'ny 2013 dia mnihabetsaka ny mpanao gazety lasibatra ny maty misy namono noho ny asany ao Syria mihoatra noho ny toeran-kafa manerana izao tontolo izao, araka ny fikarohana nataon'ny CPJ. Noho ny fitomboan'ny risika mety isian'ny famonoana sy ny fakana an-keriny, dia natsahatry ny orinasam-baovao goavana, ary ao anatin'izany ny Associated Press sy ny Agence-France Presse ny fandefasana ekipa mpanangom-baovao ao amin'ity firenena ity, izay miteraka fahabangam-baovao lalina dia lalina amin'ny fitatiterana ny vaovaon'ny ady avy amin'ny fampitam-baovao mahazatra, indrindra fa ny amin'ny teny anglisy.
Mifanindran-dalana amin'izany dia miasa ireo mpanao gazety ao an-toerana sy ny tambajotran'ireo olon-tsotra tia mampita vaovao hatramin'ny nanombohan'ny ady voalohany. Koa satria moa efa nesorina any Syria ny fampitam-baovao vahiny dia lasa loharanom-baovao sy fanadihadiana amin'ny herisetra mitranga any ireo mpanangom-baovao ao an-toerana ireo. Raha miatrika loza mitovy na mihoatra noho ireo vahiny mpanangom-baovao aza ireo vondron'olom-pirenena mampita vaovao avy ao Syria ireo dia zara raha mahazo lohatenim-baovao amin'ny fampitam-baovao tandrefana ry zareo.
Tamin'ny Desambra 2015, mpitarika ireo olom-pirenena mampita vaovao nanokana volana maro amin'ny fiainany hitaterana akaiky momba ny ady no maty tamin'ny heverina ho fikendrena manokana. Tamin'ny 16Desambra 2015 no novonoin'andian-dehilahy misarontava tao Idlib, ao avaratra andrefan'i Syria i Ahmad Mohamed Almossa, mpikambana iray ao amin'ny vondron'olompirenena Syriana mampita vaovao Raqqa is Being Slaughtered Silently (RBSS na Kendaina Mangingina i Raqqa). Izao fahafatesan'i Almossa izao dia tonga taorian'ny nanomezan'ny Komity Miaro ny Mpanao Gazety voninahitra ny RBSS tamin'ny alalan'ny Amboaran'ny Fahalalahan-Gazety Iraisampirenena 2015 noho ny fahasahiany mitati-baovao ao Syria.
Miorina ao Raqqa, notondroin'ny vondrona mitam-piadiana ISIS ho renivohiny, ny RBSS izay mandefa akaiky ny habibiana ataon'ireo mpandray anjara rehetra amin'ny ady ka ao anatin'izany ny ISIS, ny tafiky ny governemanta Syriana ary ny vondron-kery tandrefana, izay mahatratra sivily ny daroka baomba an'habakabaka ataony. Amin'ny mahatambajotra fampitam-baovao mahaleotena vitsy mbola miasa ao amin'ny firenena, dia voatsonga matetika amin'ny fampitam-baovao mahazatra ny RBSS.
Tsy ampy tapabolana akory ny namonoana an'i Almossa tao amin'ny RBSS, dia nisy nitifitra sy nahafaty ankalamanjana tao Gaziantep, Torkia mifanakaiky amin'ny sisintany Syriana ilay Syriana mpanatontosa sarimihetsika Naji Jerf tamin'ny 27 Desambra 2015. Inoan'ny maro fa maty ho famaizana azy namoaka fanadihadiana ny heloka bevava vitan'ny ISIS ao Syria i Jerf, 38 taona. Ny lahatsary maharitra 24 minitra, nozaraina tao amin'ny YouTube, dia manome fanadihadiana tamin'ireo heloka bevava vitan'ny ISIS tao an-tanànan'i Aleppo. Hita ao amin'ny heloka bevava voalaza ny fakana an-keriny sy ny famonoana mpanampy mpitsabo tamin'ny 2013 sy 2014 izay nalain'i Jerfan-dahatsary nialoha ny handehanany nankany Torkia. Nojerena tao amin'ny fahitalavitra azo zanabolana manerana ny faritra Arabo Al Arabiya, izay sarimihetsika izany taoriana ary nahazo mpijery mihoatra ny 12 tapitrisa sy fanehoan-kevitra an'arivony tao amin'ny pejy Facebook an'ilay fantsona.
Sarotra dia sarotra ny hamantatra marina hoe firy ny Syriana namoy ny ainy noho ny famoahana ny habibiana nataon'ny ISIS sy ny fitondrana Assad. Izany no mahatonga ny tantaran'i Jerf sy Almossa ho manandanja indrindra—raha vavolombelona amin'ny ezaka ataony mahatonga azy hiharihary manoloana ny habibian'ny ady ao Syria ny tati-baovaon'ny famonoana azy ireo, Tati-baovaon'ny famonoana izay mety ahafahana manazava ny tantaran'ireo olona hafa izay mety tsy holazaina mihitsy.
Fianakaviana Saodiana miatrika fandrahonana ara-pitsarana vaovao noho ny fikatrokana fandalàna ny zon'olombelona
Nosamborina ny Saodiana mpandala ny zon'olombelona, Samar Badawi, noho ny filazana ho mamelona ny kaonty Twitter an'ny vadiny izay mpisolovavan'ny mpandala ny zon'olombelona, Waleed Abulkhair, izay manapitra ny didy famonjana 15 taona noho ny lalàna miady amin'ny fampihorohoroana ahitana vesatra toy ny “fanompana ny filaminana ankapobeny” sy ny “fandrehetana ny hevi-bahoaka.” Nomelohin'ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpanao gazety amin'ny ankapobeny ny fisamborana an'i Badawi, izay anabavin'ny bilaogera iray efa migadra antsoina hoe Raif Badawi ihany koa.
Politisiana Ekoadaoreana iray hafa miatrika famonjana noho ny siokam-pitsikerana nataony
Voaheloka higadra 30 andro any am-ponja sady voasazy handoa onitra mitovy amin'ny ampahaefatry ny karamany ny mpikamban'ny vaomieran'ny fanaovan-dalàna iray ao an-tanànan'i Loja noho ny famoahany sioka iray toa mametraka fa nangalatra volam-bahoaka ny Ben'ny Tanànan'i Loja, José Bolívar Castillo, ary nandainga momba izany. Tamin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'ny gazety nasionaly iray mivoaka isan'andro El Comercio, no nilazan'i Bolívar fa nitady asa ara-pitsarana hamelezana ny mpanolotsainan'ny tanàna Jeannine Cruz, izay misolotena ny fanoherana izy. Nolazain'i Bolívar fa ny kinendrin'ny asa ara-pitsarana dia tsy ny hiaro ihany ny voninahiny fa ny hametrahana santatra trangan-draharaham-pitsarana ihany koa.
Nilaza i Cruz fa ilay didim-pitsarana dia nametraka “santatra trangan-draharaham-pitsarana mampihoron-koditra eo amin'ny tantaram-pirenenay.” Efa mikasa ny hampakatra ny raharaha fanamelohana azy any amin'ny ambaratongam-pitsarana ambony izy, izay mifototra amin'ny andinin-dalàna Ekoadaoreana famaizana heloka bevava faha-396 izay mametraka famonjana 15-30 andro izay olona “mampiseho na milaza amin'ny fomba rehetra endrika fisompara-boninahitra na fanivaivana olon-kafa.”
Mitohy ny fihetsiketsehana ao Ethiopia, ary heverina ho 140 ny isan'ny maty
Hatramin'ny nanombohany tamin'ny Novambra 2015, dia farafahakeliny 140 ny olona maty tao Ethiopia, ary mpianatra ny ankamaroan'izy ireo raha niroso ho amin'ny fihetsiketsehana am-pilaminana izy ireo. Nanao fihetsiketseham-panoherana ny mpianatra ao Oromia, faritra lehibe indrindra ao Ethiopia manoloana ny drafi-panitarana ny faritry ny renivohitra, Addis Ababa, mankany Oromia kasain'ny governemanta. Maro ny mihevitra fa ity kinasa ity dia hiafara amin'ny famoretana mivantana ny vondrom-poko Oromo, izay ataon'ny governemanta anjorom-bala hatrany tao anatin'ny roapolo taona, na dia ry zareo aza no vondrom-poko maro isa indrindra ao Ethiopia. Nieli-patrana ny tatitra fangejana ny hetsi-panoherana na amin'ny fampitam-baovao mahazatra na an-tserasera. Mba hahitana akaiky kokoa ny toe-draharaha dia niasa niaraka tamin'ny Oromo mpikatroka iray antsoina hoe Abiy Atomssa ny mpanoratry ny Global Voices iray Endalk Chala, mpikaroka akademika ao anatin'ny vondrona famahanam-bilaogy Zone9 hananganana sarintany ifarimbonana [mg] iray ahitana ny fomonoan'ny manampahefana ireo mpanao fihetsiketsehana.
Nanao soniam-piaraha-miasa amin'ny orinasam-pisivanana Kanadiana mitentina an-tapitrisany dôlara i Bahrain
Araka ny tranonkalan'ny firenena famoahana fiantsoana tolobidy, dia nofantenin'i Bahrain ny tolobidy iray avy amin'ny orinasam-pisivanana [ataovy hoe fanivanana raha manahirana ny voambolana] kanadiana iray Netsweeper hananan'ity firenena iray ao amin'ny Helodrano ity “Tranonkalam-Pirenena Vahaolam-Pisivanana” amin'ny vidiny $1.175.000 Amerikana. Efa nahazo fifanarahana avo lenta maro, sady vita ho azy ny dokambarotra, ny Netsweeper niarahany tamin'ny governemanta na vondrona maniry hametra votoaty an-tserasera na amin'ny tambajotran'olontsotra na fikambanana tsotra any an-takonana tany aloha tany, araka ny voarakitra ho atontan-kevitra ao amin'ny Citizen Lab avy amin'ny Oniversiten'i Toronto azy. Tsy fantatra hoe rahoviana ary amin'ny fomba ahoana no hametrahana ilay [fitaovam]-pisivanana, saingy ny famoretana vao haingana ireo mpanao fihetsiketsehana anti-governemanta no mampihevitra fa met ho ao anatin'ny teti-panorona goavana kokoa hanatsarana endrika ny fahefan'ny governemanta sy ny mpanjaka ity fifanarahana ity.
Fiarahan-dia manerantany mitaky fanafenan-kafatra matanjaka
Ny fikoropahana iraisampirenena nanaraka ny fanafihana tao Parisy niaraka tamin'ny fahadisoam-baovao milaza ny fampiasan'ny mpanafika fampihatran-karajia voaafin-kafatra no nitarika sombin-tolo-dalàna hametra na hanimba ireo fifandraisana voaar mampiasa fanafenan-kafatra. Ho setrin'izany dia nisy vondrom-piarovana sy fiseraseran'olona an-takonana avy amin'ny firenena mihoatra ny 40 miaraka amin'ny Access Now nanasonia taratasy misokatra ho an'ny mpitondran'izao tontolo izao mitaky ny fahafaha-miditra amin'ny fanafenan-kafatra matanjaka sy azo itokisana, tsy misy varavaram-pitsikilovana na fanovana hafa izay mety mahatonga ny rafitra ho marefo. Vakio ato ny taratasy.
Nandray anjara tamin'ny fanatontosana ity tatitra ity i Mary Aviles, i Ellery Roberts Biddle, i Marianne Diaz, i Sam Kellogg ary i Sarah Myers West .
SMisorata anarana hahazo mailaka Netizen Report